Jery taratra herinandro : samy manana izay maha kere azy | NewsMada
Voafidy ho filohan’ny Antenimierandoholona ny loholona Rakotomanana Honoré, kandidà tokana ary natolotry ny HVM. Mpahay lalàna izy, efa filohan’ny Antenimierandoholona sy ny HCC teo aloha. Nasiany teny ny tokony hanitsiana ny lalàmpanorenana. Eo koa ny amin’ny handraisan’ireo loholona karama avy hatrany. Mahakere?
Ifandroritana ny famonjena sy fanampiana ireo mponina any atsimon’ny Nosy, ianjadian’ny haintany sy mosary. Misy ny manao an’izany ho fitaovana politika. Nampanantena ny fananganana fotodrafitrasa maharitra amin’ny famatsian-drano any an-toerana ny filohan’ny Repoblika. Tsy takona afenina ny fisian’ny kere.
Tsy tokony hitera-pahavoazana ho an’ny vahoaka ny fandraisana ny Frankôfônia, raha ny fanambaran’ny Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena (Sefafi). Tokony ho an’ny rehetra ny tetikasan’ny taona 2016, fa tsy mahafa-po ny asan’ny mpitondra. Mila mijoro koa ny mpanohitra… Izay kere toerana sy fahefana izany?
Amin’ny volana jona ny fifidianam-paritra. Zakan’ny fanjakana malagasy ny fanatontosana, ka tsy hangatahina fanampiana any ivelany. Tamim-pirahalahiana ny Dinika politika niarahan’ny Vondrona eoropeanina sy ny governemanta malagasy, fa tsy nisy fandonan-databatra, raha ny nambaran’ny praiminisitra.
Na izany aza, tsy mbola afa-po amin’ireo fepetra takiny ireo mpiara-miombon’antoka: fanjakana tan-dalana, ny fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… Na izany aza, nanome vola 690 tapitrisa dolara, ohatra, ny Banky iraisam-pirenena (FMI) ho an’ny lafiny sosialy: fahasalamana, fanabeazana, famatsian-drano, fitaterana…
Nisy fihenana 280 Ar ny vidin’ny litatry ny gaz oil, 210 Ar ny solika fandrehitra, 90 Ar ny solika. Na eo aza izany, nahitana fiakaram-bidy 200 Ar any ho any ny vary, menaka, lafarinina… Mitohy koa ny tsy fandriampahalemana: nampiaka-peo manokana ny avy any amin’ny faritra Atsinanana, faritra Bongolava…
Mbola samy manana izay mahamaika azy avy ny isan-tsehatra, ambaratonga… Mazava sy mirindra ve ny politika sy ny fandaharanasa ary ny paikadin’ny mpitondra amin’izany?